Ibsa ugguura maxxansa marsariitii Addis Standard fi marii Abbaa Taayitaa Miidiyaa Itoophiyaa waliin taasifame - Mawazo Writing Africa
Ibsa ugguura maxxansa marsariitii Addis Standard fi marii Abbaa Taayitaa Miidiyaa Itoophiyaa waliin taasifame
Kamisa Adoolessa 15, 2021 Daayirektoreetiin Galmee fi Haayyamaa Abbaa Taayitaa Miidiyaa Itoophiyaa(ATMI) Hoji Gaggeessa JAKENN Publication PLC ,maxxansaa Addis Standard, biratti bilbiluun hojjattoonni Addis Standard waraqaa galmee abbaan taayitichaa Addis staandardiif Caamsaa 28/2021 kenname gara waajjira Abbaa Taayitaa Miidiyaa Itoophiyaa fidan gaafatan.
Haaluma armaan olitii ibsameen garee hoji gaggeessitonni sadi gara waajjira (ATMI) deeman.
Hojjattoonni Addis Standard erga waajjira ATMI erga gahanii booda Daayirekteerin Daayirektoreetichaa sababa haayyamni Addis Standard akka fudhatamee fi marsariitii irratti barruu kamu akka hin maxxansine hojjattoota Addis Standardiif ibsan. Murteen kun kan murtaa’e ogeeyyonni ATMI qabiyyeen Addis Standard maaxxansu ajandaa dhaaba shororkeessaa ABUT ni dhaadhessa akkasumas Human Ittisa Tigraay jecha jedhamu ni fayyadama jechuun waan himataniifi. ABUT dhaaba siyaasaa Manni Maree bakka bu’oota Uummaataa Itoophiyaa Shororkessummaan moggaasedha.
Ajaja Daayirektoreetichaa fudhachuu JAKENN Publishing PLC yeroodhaaf qabiyyeewwan Addis Standard akka hin maxxansine dubbistoota Addis Standardiif ibse.
Seerri Miidiyaa Itoophiyaa haraan Labsii 1238/2021 Abbaan Taayitaa Miidiyaa Itoophiyaa ulaagalee haayyamaa raadiyoo fi televizhiinii akka madaalu fi Midiyaalee Marsaritiitiif ammoo waraqaa beekamtii akka kennu heera.
* Keeyyatni 26 labsii kanaa Miidiyaaleen Marsariiti waraqaa galmee argachuuf ATMI himatanii yoodhabanillee seera qabesummaa isaanii hin mulqamu.
* Labsii 1238/2021,Keeyyatni 22 -loofsi 2 adeemsi galmee miidiyalee marsariiti kun walabummaa yaada ofii ibsachuu irratti dhiibbaa uumu akka hin qabaanne ni heera.
* Keeyyatni 48ffaan labsii miidiyaa mirga yaada walabaan ibsachuu fi mirga dhimmoota garaa garaa qeeqaani gabaasuu ni eega.
* Dhimmoota tarkaanfii bulchiinsaa ilaalchisee keeyyatni 73 labsichaa akkas jedha “Dhaabbileen Miidiyaa labsii kana cabsanii yoo argaman abbaan taayitichaa tarkaanfii bulchiinsaa sadarkaa adda addaatti akkaataa labsii kana keessatti heerameen fudhachuu ni danda’a.
Adabbii qarshii 200,000(Kuma Dhibba Lama) gadii
Sagantaa labsii cabsu yeroof dhorkuu yookaan ugguruu
Dhaabbata labsii cabsu irraa haayyama yeroof dhorguu yookan haayyama haquu
* Akka labsii miidiya heerutti boordiin nama sagal of keessa qabu Mana Maree Bakka Bu’oota Uummataatiin muudamee ATMI gaggeessu qaba.
* Keeyyatni 12 lakkofsi 2 boordiin qaama murtoo ATMI isa dhumaa ta’uu ibsa.
* Komii hawaasa irraa ka’u qoratee fi ilaalee kan murteessu Boordii ATMI ta’uu isaa labsii Miidiya keeyyata 5 jalatte ibsamee jira.
* Labsiin kun keeyyata 12 lakkofsa 6 jalatti dirqama boordii akkana jechuun kaa’a “koree walabaa komii dhagahu ijaaree, komii lammilee fi qaamota haayyama qaban biraa adeemsa, hordoffii fi tajaajila abbaa taayitichaa ilaalchisee boordiidhaaf yaada furmaataa dhiyeessa. Boordinis kana irraa ka’ee murtee kenna.”
Dhimmootni adeemsa fi seeraa sirnaan otoo hin hordofamin ATMI murtee dabarsuu isaa beeksise. Sababni ATMI kenne “komii fi adeemsa yaaddessaa” jedhu karaa hordoffiitiin argatedha. ‘Komii fi Adeemsa yaaddessa’ jedhame kana Addis Standard tiif ifa osoo hin godhamiin yeroodhaaf qabiyyee akka hin maxxansine dhorkame.
Kara ibsa miidiyalee gara garaa fayyadamuun, AMTI dharaan Addis Standard ajandaa garee shorokeessaa dhaadhessa akkasumas maqaa Humna Ittisa Tigraay(Tigray Defense force) jedhu fayyadama jedhe. Haata’u malee jecha kan miidiyaan biyya keessas ta’ee alaa akka hin fayyadamne abbaan taayitichaa kan ibsa baase Jimaata, Adooleessa 16/2021.
Abbaan Taayitaa Miidiyaa Itoophiyaa qabiyye Addis Standard yeroof ugguruu tasa beeksisuun isaa Akkasumas haasaan Itti anaan Daayirekteera Obbo. Yonaatan Tasfaayee Miidiyalee garaa garaa waliin godhan Labsii Miidiyaa keyyata 72 kan cabse yoo ta’u walabummaa miidiyaas daran kan miidhudha.
Murtii dabarsuun dura Addis Standardiif akkeekkachiisa kennuu kan ibsu Abbaan Taayitaa Miidiyaa Itoophiyaa, Akka miidiyaa marsariititti Addis Standard tarkaanfiin bulchiinsaa ATMI hin ilaallatu. Tarkanfileen bulchiinsaa Akeekkachiisa barreeffamaa, Adabbii qarshii fi haayyama yeroof dhorguu yookan haayyama haquun ammoo aangoo Boordiiti malee kan ATMI miti.
Wiixata Adoolessa 19/2021 Gulaaltonni olaanoo Addis Standard lama: qopheessa fi gulaalaan qabiyyee maree bu’a qabeessa daayirekteera ATIM Obbo Mohaammad Idiris akkasumas Itti aanaa daayirekteeraa Obbo Yoonatan Tasfaaye wajjiin taasisan.
* Gulaaltonni Addis Standard rakkoolee adeemsaa ATMI irratti hoggantoota ATMI ibsa laataniiru
* Gulaaltonni Addis Standard komii hoggantoota dhuunfaan kana dura Addis standard maqaa balleessaa turan irraa qaban ibsan.
* Gulaaltonni Addis Standard qorannoo qaama walabaan gaggeeffamee, himannaa ajandaa qaama shororkeessa gaggeessu jedhu dhara ta’uu mirkaneessu akkasumas maxxansuun akka barbaachisu kanaafis Addis Staandard tumsa barbaachisu akka taasisu ibsan.
* Gulaaltonni Addis Standard dhabbatichi himannaa akkanaa salphisee akka hin ilaalle isbuun, himaannaan balaa guddaa qabu kun dhara ta’uu isaa mirkaneessuuf dhama’ee akka hojjatu himan
* Dhumarrattis Gulaaltonni Addis Standard dhabbatni isaanii hordoffii walabaa abbaan taayitiichaa godhu hundaaf tumsa barbaachisaa yeroo gaafatametti akka keennu ibsan. Kana malees dhimma himannaa kanaan walqabate wanta irraa eeggamu gochuun himannaan kun ka’umsa akka hin qabne ni mirkaneessan.
* Hoggantootni ATMI Adeemsi Addis Standard qabiyyee maxxansuu irraa ittii dhorkame sirrii akka hin taane fi Seeraan ala ta’uu isaa amanan.
* Haata’u malee hoggansi ATMI maxxansi miidiyaa nageenya biyyoolessaa fi Walabummaa biyyaa hin caalu jechuun adeemsa isaaniif sababa laataniiru. Tarkaanfii atattamaa kan fudhachiise qabiyyeen qoratamaa jiraachuu kan ibsan hoggantoonni ATMI firiin qorannoo kanaas hawaasa bal’aaf ifa ni baha jedhan.
* Hoggantootni ATMI Addis Standard fayyadama jechootaa Humna Ittisa Tigraay(Tigray Defense Force) kan jedhu dabalatee akka fooyyessuu yaada laatan.
* Hoggantooti ATMI akkeekkahiisni itti fayyadama jechootaa erga Addis Standard irratti tarkaanfiin fudhatamee booda ibsamuu isaa amananiiru.
* Hoggantooti ATMI kana booda akeekkachiisni Addis Standardiif kennamu Seera miidiyaa itoophiyaa hordofee akka ta’u hubataniiru.
* Hoggantooti ATMI Addis Standardiif waraqaan galmee Roobii Adooleessa 21/2021 akka deebi’u mirkaneessaniru.
* Hoggantooti ATMI ibsa kana booda bahu irratti himannaa Addis Standard ajandaa shorerkeessitootaa gaggeessa jedhuu fi qaamolee Manni Maree Bakka Bu’oota Uummataa Itoophiyaa Shororkessummaan moggaasee waliin walitti dhufeenya qaba jedhu akka qulqulleessan himan.
Walgahiin kun wal hubannoo jabina dhimma kanaa irraatti Addis Standard fi Abbaan Taayitaa Miidiyaa Itoophiyaa qaban irraa ka’ee gaggeeffame.
Addis Standard akkuma kanaan duraa dhuudhaa fi naamusa gaazexeessuummaa eeguun ni hojjata. Kana malees akka miidiyaa walabaattii Itoophiyaa dimokiraasii fi nagaa qabdu ijaaruuf ga’ee isaa ni bahata.
Previous Statement of fact on the suspension of Addis Standard content publication & subsequent discussion with Ethiopian Media Authority
Next የአዲስ ስታንዳርድ የበይነመረብ ህትመት መታገድ እና ከኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ጋር የተደረገ ውይይት መግለጫ
Jul 24, 2021 Mawazo Writing
Federal Prosecutors bring Terrorism charges against senior members of TPLF
Jul 23, 2021 Mawazo Writing